Challenge The Good News Paper - Mufaro unotsiva kushungurudzika (Shona)
Mufaro unotsiva kushungurudzika (Shona)
Kutsvakira vana chokudya nechokupfeka nenzira yokuba ndikokwaiita sokuti ndiyo yaiva nzira yoga yokurarama kuna NorahMokoena kusvika apo akazosangana norugare nomufaro wakapedza kufunganya kwake kose.
Pamazuva okutanga baba vevana vaNorah vatatu vakanga vasingashande, asi apo vakazowana basa rokudzidzisa kuguta reDurban ukokwaiva kure nemhuri, Norah ndipo paakatanga kukoniwa kuchengeta vana vake.
Nokuda kwekugumbuka pamusoso pehupenyu hwake, Norah anoti ndipo paakaita mhosho huru akatanga kuba.
Norah anoti, "Hupenyu hwakangahwakaoma zvikuru nokuda kwekuti vana vangu vakanga achiri vaduku, ipapo ndipo pandakatanga kuba zvokudya nembatya dzevana muzvitoro." Pasati papera nguva refu, akasungwa ndokuvharirwa munerimwewo remajeri enyika ye South Africa rinonzi Boksburg.
Mukati mejeri iri ndimo maakaonawo vamwe vasungwa avo varatidza kuva nemwoyo wakasiyana nowake, vasungwa ava vaiva norugare nomufaro waaisava nawo. Pakarepo Norah akapinda muzvidzidzo zvokuva muKristu nevasungwakadzi ava, kuti adzidzewo. Norah anoti, "Ndinotenda shamwari yangu Gwen, nokuti ndiye akandidzidzisa kubvuma zvivi zvangu kuna Mwari ndakadzidzawo zvinhu zvakawanda muzvidzidzo izvi."
Nokufamba kwenguva, Norah akazoziva kuti Mwari vaida kuti aitei "Ndakadana Jesu Kristu kuti auye muhupenyu hwangu, kuti ndimuraramire." Akadana Jesu Kristu kuti aregerere zvivi zvake pamwe nokubata hupenyu hwake.
Mushure meizvi, Norah anoti aakungona kuregerera vanomutadzira.
Norah anoti, "Ndisati ndaziva Jesu, ndaisagona kuregerera uye izvi zvaindiremera zvikuru." Nomufaro Norah anoti, "Nokuti ndava na Jesu Mandiri, ndava nomufaro mukuru." "Mazuva ano vanhu vaakutonyawo kwandiri kuti ndivanyengeterere."
Panoperera husungwa hwake, Norah achabuda mujeri ava namaonero akasiyana neaaiva nawo achipindamo.
"Ndirikunamatira kuti pandinobuda mujeri muno ndiwanewo basa, ndizvishandire namaoko angu nokuti Jesu haazofi akandisiya, "Norah anodaro achitora shoko riripana vaHebheru 13:5.
Panokuita zvivi munguva dzokuomerwa noupenyu Norah aakuziva vimbiso dzinopihwa naMwari mubhaibheri, vimbiso seinorehwa naJesu muna Mateo 6.
Jesu akati, "Saka ndinoti kwamuri, regai kufunganya pamusoro poupenyu hwenyu, muchiti ndichadyei kana ndichanwei, kana pamusoro pemviri yenyu, muchiti, ndichapfekeiko? Hupenyu hahupfuri zvokudya here, kana muviri haupfuri zvipfeko here? Tarisai shiri dzedenga hadzidyari hadzikohwi, hadzitutiri mumatura, asibaba venyu varikudenga vanodzipa zvokudya. Imi hamudzipfuri zvikuru here. Ndiani ko pakati penyu angawedzera kubiti rimwe pahurefu hwake nokufunganya? NavaHedheniwo wanodzingirirana nazvo, uye baba venyu varikudenga vanoziva kuti munozvida. Tsvagai kururama noushe hwedenga, zvose izvi zvigopihwa kwamuri."
Nokuvapo kwesimbiso idzi, Norah anoti, "ndichashandira nokushumira Jesu Kristu nguva dzose ndinotenda Ishe nokushandura hupenyu hwangu." •
<< Vreugde in die plek van bitterheid (Afrikaans)
Cast your care >>